Emailku ma dhintay? Ha u sheegin taas Jenni & Janneane | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 29, 2010 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Markasta in yar ayaad maqashaa gunuusyada… email baa dhintay. Caadi ahaan waa ka dhawaajinta dadka waawayn ee sanduuqa lagu xujeeyo oo aan waligood si sax ah ula macaamilin dadaalkooda emaylka. Emailku wuu ka fog yahay… caddayntuna waa ganacsiyada oo kale Indy Daawade.
Indy Spectator waa shirkad emayl ku saleysan oo keliya. Waxay shaqaaleeyaan qorayaal karti leh si ay uga sheekeeyaan sheekooyinka ku saabsan tagitaanka Indianapolis. Jenni Edwards waxay fikradda ku aragtay suuqyo kale, iyada oo iyadu ah isku xiraha shabakadeed ee cajiibka ah, waxay ku biirtay xoogagga Janneane Blevins si ay u abuurto bilowgan sida cajiibka ah u guulaystay. Laga soo bilaabo Abriil, waxay arkeen liiskooda macaamiisha oo laba jibaarmaya toddoba jeer!
Dhawaan ayay magacyadooda dib u habeyn ku sameeyeen, iyagoo kaashanaya Kristian Andersen + Asxaabtiisa (waa mid ka mid ah shirkadaha waaya aragnimada ugu fiican adduunka… iyo loo shaqeeyaha Janneane). Wargeysku markii horaba wuxuu ahaa mid fantastik ah waxyaabaha ku jira the laakiin hadda naqshadeynta ayaa la jaanqaadaysa waxyaabaha ay ka kooban tahay:
Waa maxay ujeedkeygu? Ma jiro meel dhexdhexaad ah oo ka wanaagsan oo lagu qaado farriinta sidan oo kale ah emaylka. Waa mid gaar ah, waa gaar, waana mid heer sare ah. Balooggu waa dhexdhexaad weyn, laakiin baahinta qof walba wuxuu ka dhigayaa waxyaabaha ku jira aragti ka duwan, loomana cabi doono ama looma falcelin doono si isku mid ah. Nakhshadeynta summad u dhiganta nuxurka waxay ka dhigeysaa mid aad u heer sarreysa ah
Oktoobar 29, 2010 at 11:39 AM
Thanks Doug jacaylka! Sida qoraal - websaydhkeenna aan dib loogula soo bixin magaca cusub weli yet waa inuu noqdaa muddo yar ka dib oo waxaa ku jira sawirro qaali ah oo laga soo qaaday Joetography oo ku lifaaqan KA + A design - sharaf leh!
Xusuusin ahaan - waxaan sidoo kale bilaabaynaa Bilaabiyaha 'Startup Spectator' si aan uqabano wararka bilowga ah ee ku saabsan Indy… waxay noqon doontaa mid si heer sare ah u qurux badan!
Mar labaad waad mahadsantahay - emaylku wuu fogyahay!